Warshadda Alaabta | Soo -saareyaasha Alaabada Shiinaha, Alaab -qeybiyeyaasha
Boorsooyinka Gusseted hoose
Boorsooyinka Hadalka leh
Boorsooyinka Lakabka ah
Jeebka Gusseted Side
Boorsooyinka Seddexda Dhinac
Boorsooyinka Hoose ee Flat
Boorsooyinka Daabacaadda Dijital ah
Iyadoo aan lahayn kharashyada taargooyinka ama dhululubada, daabacaadda dhijitaalka ah ayaa ah doorasho weyn oo loogu talagalay mashaariicda muddada gaaban iyo SKU -yada badan. Teknolojiyadda daabacaadda dhijitaalka ah lafteedu waxay leedahay astaamaha wax -ku -oolnimada daabacaadda degdegga ah, tayo wanaagsan, xallinta sare iyo hawlgalka habboon, waxaana doorbiday warshadaha daabacaadda.
100% Jeebka dib loo warshadeyn karo
Macaamiisha raadineysa baakadaha dib loo warshadeyn karo, waxaan u fidineynaa boorsooyin dib loo warshadeyn karo oo laga sameeyay maaddada mono, 100% polyetylen (PE). Bacahaas baakaduhu waxay ka samaysan yihiin PE oo laba jibbaaran taas oo 100% dib loo warshadeyn karo sida lambarka 4 alaabta LDPE. Dhammaan waxyaabaha ku jira dib -u -warshadayntayadu waxay taagan yihiin kiishashka, siibadaha iyo baakadaha ay ku jiraan, waxay ka samaysan yihiin wax isku mid ah, polypropylene.
Boorsooyinka qaabaysan waxay u dhigaan ikhtiyaarrada shelf wanaagsan ee rafcaanka astaanta. Waxay yihiin kuwo aad u saaxiibtinimo leh oo waxtar leh. Isticmaalka farsamada wax-soo-saarka iyo tiknoolajiyadda oo heer sare ah, boorsooyinkayaga qaabaysan ayaa loo qaabayn karaa nooc kasta oo baakadahaaga ah oo ku habboon midabo iyo cabbirro kala duwan.
Iyadoo aan lahayn kharashyada taargooyinka ama dhululubada, daabacaadda dhijitaalka ah ayaa ah doorasho weyn oo loogu talagalay orodka gaaban mashaariicda iyo SKU -yo badan. Teknolojiyadda daabacaadda dhijitaalka ah lafteedu waxay leedahay astaamaha wax -ku -oolnimada daabacaadda degdegga ah, tayo wanaagsan, xallinta sare iyo hawlgalka habboon, waxaana doorbiday warshadaha daabacaadda.
Xidhmada faaruqintu waa hab wax lagu xidho oo hawada ka saara baakadda ka hor intaadan xidhin. Ujeedada baakidhku waa sida caadiga ah in oksijiin laga saaro weelka si loo kordhiyo nolosha cuntada, iyo in la qaato foomamka baakadaha dabacsan si loo yareeyo waxa ku jira iyo mugga baakadaha.
Boorsooyinka barkimadu waa mid ka mid ah kuwa ugu dhaqammada badan oo mar walba la doorbido ee baakadaha dabacsan, waxaana loo adeegsaday in lagu xiro foomamka wax soo saarka ee kala duwan. -waxaa badiyaa loo banneeyey buuxinta waxa ku jira.
Boorsooyinka dhinac -ka -geddisan waxay leeyihiin laba guss dhinac ah oo ku yaal dhinacyada boorsooyinka, kor u qaadista awoodda kaydinta, ayaa ah xulasho weyn oo loogu talagalay xirxiridda mugga badeecadaha. Ka sokow, boorsooyinka noocaan ah waxay qaadanayaan qol yar iyagoo weli bixiya meelo badan oo shiraac ah si loo muujiyo loona suuqgeeyo astaantaada. Iyada oo leh astaamaha qiimaha waxsoosaarka wax-soo-saarka, nolosha shelf ee indhaha soo jiidanaysa iyo qiimaha iibka ee tartan, boorsooyinka gusset-ka ayaa qayb muhiim ah ka ah warshadaha baakadaha dabacsan.
Boorsooyinka gusset-ka hoose waa boorsooyinka istaagga ee inta badan la isticmaalo. Gussets -ka hoose ayaa laga helaa gunta hoose ee boorsooyinka dabacsan. Waxay u sii kala qaybsan yihiin xagga hoose ee beerta, X-shaabadaynta, iyo gussets hoose ee wareegsan. Boorsooyinka gusset ee K-Seal iyo Plow Bottom gusset waxaa laga beddelay boorsooyinka gusset-ka hoose si loo helo karti dheeraad ah.
Boorsooyinka hoose ee sagxadda leh ayaa ah warshadaha baakadaha cuntada ee ay ugu jecel yihiin, oo aad iyo aad u caan ah. Waxay leeyihiin magacyo badan, sida boorsada hoose ee sanduuqa, kiishka sanduuqa, kiish leben ah, bacaha hoose ee afargeeslaha ah, iwm. Waxay yihiin 5-dhinac, kor u qaadaya rafcaanka shelf oo leh shan guddi oo ah aagga dusha daabacan si ay u muujiyaan badeecadaada ama astaantaada si wax ku ool ah. Ka sokow, boorsooyinka sanduuqyada ayaa aad ugu xasilloon armaajooyinka waana fududahay in la isku xiro siinta fududeynta tafaariiqleyaasha iyo macaamiisha labadaba, taas oo kor u qaadi doonta tartanka suuqa, waxayna ku habboon tahay dhismaha astaanta wax soo saarka iyo sumcadda sumcadda.
Filimka Rollstock wuxuu loola jeedaa filim kasta oo baakidh dabacsan oo la daboolay oo ku jira foomka duudduuban. Waxay la jaban tahay qiimo jaban waxayna ku habboon tahay dhaqso orodka iyo badeecadaha macaamiisha. Waxaan bixinnaa alaabada filimka duubista caadooyinka oo tayo sare leh oo leh cabbirro kala duwan, agabyo iyo dahaarro loogu talagalay dhammaan noocyada alaabada si loogu socodsiiyo foomkaaga toosan ama toosan buuxinta iyo xir mashiinka xirmooyinka ..
Way fududahay in la furo oo si sahlan loo xiro, sibraar-ku-xidh-xidh waa ikhtiyaar aad u fiican, kharash-ku-ool ah oo dib-u-soo-celin/dib-u-habayn kara oo loogu talagalay noocyo badan oo kiishyo dabacsan, oo ay ku jiraan boorsooyinka istaagga iyo boorsooyinka jiifka ah, oo wax ku ool u ah ka-hortagga faddaraynta ama daadinta iyo ilaalinta badeecada macaankeeda.
Boorsooyin shaabadaysan oo saddex dhinac ah, oo sidoo kale loo yaqaanno kiishash fidsan, ayaa lagu shaabadeeyey labada dhinac iyo hoosta, xagga sarena wuu u bannaan yahay buuxinta waxa ku jira. Boorsooyinka noocan ah waa boorsooyin fidsan oo wax-ku-ool ah, ma fududa oo keliya in la buuxiyo badeecadaha laakiin sidoo kale waxay cuntaa waxyaabo badan. Waa ikhtiyaarka ugu fiican ee fudud, keli ah, cunto fudud marka la socdo ama alaabta cabbirka saamiga si loogu isticmaalo bixinta. Boorsooyinka dhalada ah ayaa sidoo kale ah doorasho aad loo jecel yahay baakadaha faaruqinta iyo baakadaha cuntada barafaysan.
Linyi Guoshengli Waxyaabaha Baako Co., Ltd.